WINHMS for Hotels - Tech Reliance
What is WINHMS
WINHMS isacomprehensive hospitality enterprise resource planning (ERP) solution, which is developed by Winsar InfoSoft, India.
Why use WINHMS
• More stable and secured system with cutting edge technologies.
• Cost effective, easy to use and highly intuitive.
• Developed and refined overaperiod of 16 years to meet the needs of small, medium and large hotels including resorts and chains.
• Speeds up property management accounting and streamlines both front and back office business process.
• Used by 1300+ customers in more than 25+ countries – India, UAE, UK, Malaysia, Cambodia, etc.
• Integration into travel agents and online booking agents with comprehensive tracking of all sales streams.
• Included booking engine interfaces, membership system interfaces
• The prompt help is at your fingertips via built-in Help system or via our 24-hour Support Centre.
Front Office ဆိုတာကတော့ ဧည့်သည်တစ်ဦး ဟိုတယ်သို့စတင် ဝင်ရောက်ချိန်မှစလို့ ထွက်ခွာချိန် အထိ စီမံ ဆောင်ရွက် ပေးရတဲ့ စနစ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
WINHMS ရဲ့ Front Office မှာဆိုရင် ဧည့်သည်၏ check-in/check-out တို့ကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ရေး အချက် အလက်တို့ကို လည်းကောင်း တိတိကျကျ မှတ်သား ပေးနိုင်သည့် အတွက် အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် management report အမျိုးမျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reservation creation, amendment and cancellation
Reservation check-in, Walk-in check-in
Reservation advance and refund
Extensive tariff management
Guest messages, complaints, requests and suggestions
Guest ledger, Occupancy report, Tax report
Extensive guest profile management
Foreign currency tariff and exchange
Guest charges, refunds, paid-outs
Group reservation and check-out
Enquiry and denial
Travel agent room allocation
ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံရိပ် အတွက် Housekeeping ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည် တွေအတွက် သာယာ လှပအောင် သန့်ရှင်းအောင်၊ စိတ် ပျော်ရွှင်အောင် ဖန်တီး ပေးသောဌာန ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
WINHMS ရဲ့ Housekeeping မှာဆိုရင် အခန်းများ၏ သန့်ရှင်းမှု အခြေ အနေ၊ အခန်း အသီးသီး အတွက်လုပ်ဆောင် ရမည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ တည်းခိုနေသည့် ဧည့်သည်နှင့် ပတ်သတ်သည့် မှတ်သား ထားရန် အချက် အလက်များ အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းပေး ထားနိုင်ပါတယ်။
Lost and found, missing and damaged
Tag room as dirty, clear dirty rooms
Guest complaints, suggestions, messages
Guest likes and dislikes
Guest charge posting
HK store, linen stock
Call Monitoring ဆိုသည်မှာ ဟိုတယ် တစ်ခု လုံးရဲ့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ WINHMS ၏ Call Monitoring မှာဆိုရင် ဟိုတယ် တစ်ခုလုံး၏ အဝင် အထွက် ဖုန်း call များအားလုံးကို မှတ်သား ခြင်း၊ လိုင်းလွှဲပေးခြင်း၊ ဧည့်သည်များ အတွက် နိုင်ငံခြား trunk call ခေါ်ပေးခြင်း၊ မနက်ခင်း နှိုးပေးခြင်း တို့ကို စီမံ ဆောင်ရွက် နိုင်တဲ့ စနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဧည့်သည်၏ ဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်း၊ ရီပို့ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါတယ်။
Provides detail list of call charges
Schedule wakeup calls, bar calls
Transfer calls from one extension to another
Interface to all leading EPABX vendors
Extension-wise calls, department wise calls, trunk-wise usage
Extension transfer list and list of unbilled calls
ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ Back Office မှာဆိုရင် General Ledger (GL) ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ် အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ General Ledger module က ဟိုတယ် တစ်ခုလုံး၏ ငွေကြေး စာရင်းဇယားများ ကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်း ပေးခြင်း၊ စီမံ ခန့်ခွဲ ပေးခြင်း ၊ လိုအပ်သည့် အခါ တိတိကျကျ အချက် အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်ပေး နိုင်ခြင်း များအပြင် အရေးကြီးသော ဒေတာ အချက်အလက် များကို ကာကွယ်ပေး နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Account Receivable/Payable module ဖြင့် နေ့စဉ် ငွေကြေး အဝင်အထွက် စာရင်းများ အားလုံးကို တိတိ ကျကျ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခြင်း၊ ရရန်ရှိ နှင့် ပေးရန်ရှိ ငွေစာရင်းများ အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
User defined GL transactions
Fiscal period closing/reversing
Outstanding bills aging
Account books, Day books
Balance report, Balance Sheet
Graphs for profit and loss, cash flow, revenue analysis
Reminder letter, Payment advice
Copy transaction, TDS auto computing
Credit/Debit bill matching
Department GL, trial balance
GL - Multiple years
Auto reversal, VAT reports, etc.
WINHMS ၏ MIS & Budgeting မှာဆိုရင် ဌာနအလိုက် ရသုံးမှန်းခြေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အမှန်တကယ် စိုက်ထုတ်ငွေနှင့် အမြတ်အစွန်း ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း တွက်ချက်ခြင်း ၊ နှိုုင်းယှဉ်ခြင်းများသာမက ဌာန တစ်ခု ချင်းစီရဲ့ ငွေကြေး ဆိုင်ရာတွေကိုပါ အသေးစိတ် စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MIS group ledger account on one-to-one, one-to-many relations
Division or Department-wise profitability
Comparison of data (actual vs budget)
WINHMS ၏ Inventory Management စနစ် မှာဆိုရင် ဟိုတယ်ရှိ ပစ္စည်း အဝင် အထွက် စာရင်းများ အားလုံးကို တိတိကျကျ မှတ်သား ထားပြီး ၊ လွယ်ကူစွာ စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သည့် အခါ စာရင်းနှင့် လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး နိုင်သော report များကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Material request, receipt, issue and Receipt return
Stock reorder level analysis
Material indent alert E-Mail for approval
Physical inventory reconciliation report
Stock ledger, stock summary, stock aging report
Hight-value stock list, Non-moving item report
VAT Detail report (Bill-wise/Supplier-wise)
ABC analysis, XYZ analysis
Average consumption analysis
Month-wise receipt/Issue tabular analysis
Butchery yield realization analysis
ဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို purchasing ဌာနကဝယ်ယူပြီးပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းပေးရပါတယ်။
WINHMS ၏ Purchasing စနစ် မှာဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရာတွင် ဆောင်ရွက်ရသည့် ဈေးနှုန်းများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ကုန်အမှာစာ ပေးပို့ခြင်း၊ ကုန်မှာစာ တို့၏ အခြေ အနေကို ခြေရာခံခြင်း၊ ရောင်းချသူ တို့၏ အချက် အလက်များကို မှတ် သားခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စနစ် တကျ ဆောင်ရွက် လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Purchase value analysis
Supplier order history
Approval for PR & PO
Supplier PO History
Quotation Request and Approval
Short Close PO, Bulk Close PO, Standard PO, Auto PO, Service PO
PO approval alerts through E-mail
Rate fluctuation report
F & B Costing မှာဆိုရင် အစား အသောက် ချက်ပြုတ် ရောင်းချရာ တွင် ကုန်ကျစာရိတ် တွက်ချက်မှုကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ တူညီသောရောင်းကုန် ပစ္စည်းများ အပေါ် market price ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဟင်းလျှာများကို ဖန်တီးရာမှာ အထောက်အကူဖြစ် စေပါတယ်။
Detailed Recipe Creation
Market-price based recipe costing
Consumption based costing system (Gross Profit and Net Profit)
Costing Analysis (Outlet-wise/ Cost center-wise)
Sales Percentage based Analysis
POINT-OF- SALE (POS)
WINHMS ၏ POS ကိုတော့ အစား အသောက် ရောင်းချတဲ့ Food & Beverage ကောင်တာများ မှာလည်း အသုံးပြု သလို၊ Front Office နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဧည့်သည် ထံမှ တည်းခို နေထိုင်ခ ကောက်ခံ ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမျှမက ဟိုတယ်မှ ရောင်းချသည့် အမျိုးမျိုးသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဧည့်သည်မှ မှာကြားခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း ၊ Bill တွက်ချက်ပေးခြင်း စသည့် အရောင်း ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါတယ်။
Kitchen Order Token (KOT), Bill Settlement
Audit reports (for KOT, Bill, Bill re-print, Bill re-settlement)
Sales day book, open items, menu list, settlement list, tax report
Popularity/Non-Popularity analysis, Sales analysis
Extension guest profile
Special menu, Happy hour
Split Bills/Bill cancellation
E-mail for guest (Birthday & Anniversary, Promotion)
Weekly Cover Analysis, NC KOT Budget Analysis
HR Recourse Module က ဝန်ထမ်းများ ၏ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးပြု ရမည့် module တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီး ၊ HR ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွယ်ကူချောမွေ့ အောင် ကူညီ ပေးနိုင်ပါတယ်။ Employee များ၏ စွမ်းဆောင် နိုင်မှုများ၊ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း ပေးရုံသာမက ၊ လစာ တွက်ချက်ပေးခြင်းကိုပါ စနစ် တကျ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် နို င်သော အရေးကြီးသည့် စနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Employee Management, attendance & leave Management
Payroll computation, salary history, earnings and deduction, attendance history
ဟိုတယ်ရှိ စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် အတွက်၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း ပေးခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း၊ ခြေရာခံပေးခြင်းတို့ကို Engineering Module ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ဟိုတယ်Member များ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို မှတ်သား ထားပေးနိုင်တဲ့ စနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်ခံပွဲများ ၊ အစည်း အဝေးပွဲများ အတွက် Reservation မှ Billing အထိ စလယ်ဆုံး မှတ်သား တွက်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Customer၏ တုန့်ပြန်မှု အားလုံးကို စမ်းစစ်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်အောင် အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
SPAသို့လာရောက်သော Customer၏ အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပေး၍ SPA၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အားလုံးကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုတယ် တစ်ခုလုံး၏ ဂိတ်အဝင်အထွက်များ အားလုံးကို လုံခြုံအောင် အချိန်နှင့်အမျှ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Customer များ၏ golf ကွင်း အသုံးပြုမှု၊ golf ပစ္စည်းများ ငှားရမ်း သုံးစွဲမှု တို့ကို မှတ်တမ်းတင် ပေးခြင်းများ သာမက၊ ကစားသူများ လွယ်ကူစွာ Reservation လုပ်နိုင်အောင်လည်း ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။
Available web based or cloud based model solution.
Allow to customize the solution to fit in your business.
Assist you by 24/7 technical support.
Train your staff individually and support their works and operations.
Provide interfaces to integrate with third-party applications such as passport scanner, biometrics device, etc.
Tech Reliance is the authorized reseller of the product in Myanmar.